The Brave Sang Kancils *satire*
Syed Mokthar eyes the big one. Najib favours Syed!
Bad days in Burma exposing the wrong standings of some Monks and Daw Suu
Statement of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar By Tomás Ojea Quintana
Women And Their Many Mistakes With Men
Selangor Bakal Ambil Alih Semula 33 Loji Rawatan Air Dari SYABAS
ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာ၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ (အပိုင်း ၂)
ရိုဟင်ဂျာပြသနာ၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ – အပိုင်း ၁။ အောင်ထူး (ရှေ့နေ)
Thakhin Kodaw Hmine’s message for Light of the world, Myanmar Muslim magazine
အာဏာရူးတွေရဲ့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် သွေးထိုးဖန်တီး အကွက်ဆင်ထောက်ချောက်လုပ်တာတွေ
Thank You Lee Chong Wei – I believe many of you were watching the Olympic Badminton Final together in your room, living room, outside with friends and anywhere. It's sad and pity to see just two point slipped away. I believe some of you cried for him too.
I was watching with my housemate, it was really nervous and exciting. Watching the point being tied at most of the time was just so uneasy, it's like riding onaroller coaster. Twitter was trending 'DLCW' 'Don't Let China Win' 'LCW4GOLD', I join the talk with 'Don't Let China Win', unfortunately, Lin Dan wins again.
No doubt LD is good, but Dato Lee Chong Wei is good as well! Perhaps, he is our Malaysian Pride. He is the one who unite the whole Malaysia to watchabadminton match. Although Negaraku cannot be heard, we still can see Malaysia flag rising into the air.
You did great, thank you Lee Chong Wei.
By the way, Lin Dan sucks. LOL. Whata'kukujiao shithead' with an arrogant face. Good night guys! Tomorrow sing k, woohoo!
Posted: 05 Aug 2012 10:17 AM PDT
Afternoon Lunch At Kim Gary With Friends – Back to KL, different lifestyle back here, no more heritage seeing, cycling, sunset/sunrise searching and street food, life in the city is always shopping mall, driving, restaurants and that's it. Different place, different style of life.
So, Sunday went to where? Went to Ikea, went to eat Kim Gary at The Curve – the kidnap mall with friends from, err, everywhere, Connie from Sandakan? Henry from Johor Bahru? Arvin Medan, Indonesia? Only Laiquen, the only KL local. Haha.
Super crowded at Ikea and The Curve and spent almost half of our afternoon in Kim Gary Restaurant. It'd been ages since I've visited Kim Gary Restaurant. Last time I used to visit it all the time when I was in Penang, but now very seldom already.
After eating until so full, we went Ikea forawhile. I think there's more people shopping in Ikea than at Tesco at that time. I'm starting to get bored of Ikea already because I've been there for so many time and I know where is what and the price. Haha. Although it's boring, I still bought stuff, some storage box andaGolden Gate Bridge poster (will share other time when my room is clean XD). Well, I am waiting foranew term of Ikea catalogue (2013), guess soon already?
Anyway, check out the food we had today, not reviewing, just some food p0rn for you. =)
Cheese Baked Seafood Abalone Rice.
Member's special – special mashed potato, with crab stick, cheese, and shrimp.
Western set - chicken chop, pork chop, ham, sausage, sunny egg, rice and some vege.
Spanish fried rice, my order, mussle, green lantern chili, tomato, onion, shrimp and ham, tasted spicy and sweet.
Posted: 05 Aug 2012 10:07 AM PDT
Almost 55 years after Merdeka and our march to attainafully-developed nation status is on the right track, it is sad to note that we are still very much inhumane.
Sorry to say, sometimes our rhetoric does not carry much weight. Our slogans failed to stand while some of our policies are good for backfiring.
Yes, we are not very humane in treating our own people. While we shout around about the basic rights for our own people - education, housing, legal, etc - we are actually still deprivingafew hundred thousands of their citizenship.
According to records, the National Registration Dept (NRD) under the Home Ministry had rejected (as July 2010) about 300,000 applications for MyKad and Permanent Residence (PR) status for various reasons.
Of course the government imposes stringent provisions for applicants but there are still rooms to regulateabetter law on PR and citizenship.
I think not many or us are aware that there are 'Malaysians' without any ID although there were born and brought up in the country, most of whom are already aged 20 to 50! They found it difficult to enroll in any government schools because they don't possess any identification card, let alone gettingajob.
Not to mention Sabah and Sarawak where the case is rampant, there are many such cases in the Peninsular that demand special attention from the government.
These people have to citizenship. They don't belong to any country and by our law, they are labelled as persona non grata, people not wanted by anybody, by any country.
For example, their parents migrated from Indonesia, the Philippines, Thailand, Cambodia and other countries before and soon after Independence and stayed and worked here. They also died here without proper documents.
Their children were born in Malaysia, also without proper documentation. When they grew up, they speak our language and know everything about they country of their birth. But they found it difficult to get education at government schools. And so, they were left out.
Since birth, they never left the country. Some of them are over 30 years old now, doing odd jobs and are illiterate. Until the day they die, I believe we will still refuse to recognise them as Malaysians.
So, what do we call them? Illegal immigrants? And what crime have they commit for us to deny them their rights as citizens and to enjoy their basic rights?
Some of them are being detained for almost or more than two years now at the detention centers nationwide, notably in Pekan Nenas and Semenyih. The reason being, we got no place to send them as they don't belong to any other countries.
And we keep on 'keeping' them at the detention centers, frustrate them and hoping they will rot inside.
The Home Ministry should look further into this case. While we impose strict procedures on PR applicants, we can still offer PR to foreigners, including artistes and those with money.
We brought in the Palestinians, Rohingyas, Iraqis and others, gave them PR, education and other facilities that are much better than most ordinary Malaysians. We even sponsor their higher education and provided them with good shelter.
But what about these Malaysian-born persona non grata? By rights, they deserve what we enjoy, including the rights to vote. However, nobody in the government is seriously reviewing the matter as we are so busy fighting for politics and power.
We are proud of our achievement and boast aloud of our thrust for education and other basic rights but we at the same time also decline to dirty our hands with things like this. We know about their existence but we did nothing thus far to settle the problems of about these 400,000 persona non grata.
Posted: 05 Aug 2012 10:23 AM PDT
Posted: 05 Aug 2012 08:35 AM PDT
Posted: 05 Aug 2012 05:05 AM PDT
Umno President says, Country's wealth must be distributed in balanced manner.
But everyone knows the rich getting richer and Syed Mokhtar likeaking, says senior Umno MP.
Now, Syed Mokthtar eyes the big one.
Posted: 05 Aug 2012 04:37 AM PDT
Bribing people to perform turns them into mercenaries. It debases, degrades, and demeans work. It setsavicious, self-perpetuating cycle into motion — incentives, inducements, rewards, and the like leave people feeling manipulated and overly focused on what they get for complying with management's goals and direction (tuned only to WIFM — "what's in it for me"). The emptier work is, the more people look elsewhere for fulfillment; so we demand more money and incentives to continue working in suchameaningless, unfulfilling job (which then "proves" to managers that people won't improve their performance unless they're bribed to do so). Money is rarely an effective rallying point for high performance. That's because money doesn't provide deeper meaning and inspiration forabigger cause and purpose.
We're big believers in paying people very well. We agree with the wag that said, "If you pay peanuts, you get monkeys." We have long believed in, and practiced, profit sharing and organization or team performance bonuses. The people who helped create the profits should share in the rewards in proportion to their contribution (which can be very tough to establish).
Posted: 05 Aug 2012 03:11 AM PDT
About 100,000 Rohingyas (out ofapopulation of 800,000) are now internal refugees in Burma, while others have fled across the border into Bangladesh. As you would expect, the Buddhist monks of Burma have stood up to be counted. Unfortunately, this time they are standing on the wrong side.
And Aung San Suu Kyi, the woman who spent two decades under house arrest for defying the generals ― the woman who may one day be Burma's first democratically elected prime minister ― has declined to offer any support or comfort to the Rohin
Nelson Mandela, with whom she is often compared, would never have said anything like that, but it'safailure of courage on her part that has nothing to do with her religion. Religious belief and moral behavior don't automatically go together, and nationalism often trumps both of them. So let's stop being astonished that Buddhists behave badly and just consider what's really happening in Burma.
Read all here @ Bad days in Burma in the Korea Times
Posted: 05 Aug 2012 02:07 AM PDT
And the last icing on the cake was President's Office Director's wrong report in his FB that Armed Bengalis Illegally Invaded Myanmar soil forcing all the people to toe the line of calling for National Security Issue.
Posted: 05 Aug 2012 05:16 AM PDT
Posted: 05 Aug 2012 01:48 AM PDT
I am concerned, however, at the allegations I have received of serious human rights violations committed as part of measures to restore law and order. These include the excessive use of force by security and police personnel, arbitrary arrest and detention, killings, the denial of due process guarantees and the use of torture in places of detention. While I am in no position to be able to verify these allegations at this point in time, they are of grave concern. It is therefore of fundamental importance to clearly establish what has happened in Rakhine State and to ensure accountability. Reconciliation will not be possible without this, and exaggerations and distortions will fill the vacuum to further fuel distrust and tensions between communities. Therefore, I join the calls of others for an independent and credible investigation into these allegations of human rights violations asamatter of urgency. And I offer my assistance in this regard.
ENDS But to read in full, in detail go to Statement of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar By Tomás Ojea Quintana,4August 2012, Yangon International Airport, Myanmar
Posted: 05 Aug 2012 01:47 AM PDT
She will be in London to support Datuk Lee Chong Wei in the London 2012 Olympics badminton final match where he will meet China's Lin Dan. It is generally seen as Malaysia's likeliest chance foragold medal, with Lee only managingasilver in the same event at the last Beijing Olympics.
Posted: 05 Aug 2012 12:30 AM PDT
There is one book that I carry with me in my handbag wherever I go that is written by Alan and Barbara Pease - WHY MEN DON'T LISTEN AND WOMEN CANNOT READ MAPS. This wonderful book explores the profound communication differences between men and women to give us insight into why we each haveadifferent reaction to the same thing. In very simple terms, they show (with the most hilarious illustrations) how the wiring in male and female brains is significantly different and affects how we perceive the world and each other.
Now, if I were to adopt that premise, I can safely confirm that women make many mistakes with men simply because women EXPECT men to be like them (and when men are like them, they get upset!!!), think like them (and when men do think like them, they still get upset!!) and of course to understand them, to know what they want or need without opening their mouths. We have to face it - Men and women are DIFFERENT! Period. And we can save ourselvesalot of heartache if we stop trying to change our spouse, trying to force our spouse/partner into the mould that we selected for them. There is freedom in expressing our own individuality, within boundaries of course. If we were to adopt this perspective, there would be less quarrels, misunderstandings and unnecessary conflicts.
Men are different from women. Women really need to accept this fact, and deal with it. Whenawoman seesaman, she unconsciously analyzes his style, body language, status and character that will tell her all kinds of things about him. But men just DON"T DO THAT!!
Generally, men are more visual and pay less attention to non-verbal communication cues like women. It is just not the same because often times, men lack emotional awareness and "intuition" which seem to abound in women!!! To exacerbate matters, women don't seem to realize this about men.
I have been hunted down by some girlfriends who keep recounting dates and what the date said or did and I have to giveaverdict of whether the guy is or is not interested in her. Gosh! And when I have given my two cents worth, they replay the whole scenario and expect me to give my verdict again. A few days later, they ask me again and again!!!! I am not joking. Afterafew times, I tell them - please don't ask me again. I have already said my piece and if they still do not listen, I start the conversation by saying, "If you are going to ask me the same question which you have been asking me for the past two weeks, which I have already answered, then I cannot carry onaconversation with you." Stunned, they change the topic quickly. I am serious. I do not like to feed people's needy nature even though I used to be needy. Thankfully, I came to my senses and am not like that any more.
So do men feel sexually attracted to w0men based just on looks? Or is something else going on?It is obvious that men have their "attraction mechanisms" triggered by things OTHER than looks. Especially when it comes to longer term relationships. Looks just happen to be the most obvious way...
One must know how to use your body language AND communication correctly, to make men feel the same kind of powerful sexual attraction that YOU feel when you see that hot, great looking guy that you got to know. But it's not an accident. You have to LEARN how to do this. And ANY woman can learn how without behaving likeatart!
Personally, I believe that the greatest mistake women make with men is that they need men to validate their person hood or femininity and to make them complete. Far too many women are inaneedy position - I have seen it so often in many women and how they can die without their boyfriend or when they are dumped etc. I know of cases where some took months to recover! So what if someone you are dating dumps you..it is better that it happened before marriage than when they are married. Each person regardless of their gender MUST find their person hood themselves, to be in touch with themselves without being inaneedy situation where they feel that they can only move into self-actualization mode when someone of the opposite sex validates them in the way they want.
Thirdly, I believe that many women make mistakes with men because they give and give and give of themselves to men in terms of their time, emotions, phone calls, little gifts and often her body without asking for anything in return but secretly expecting dividends! Some even have the misconception that by giving more, she'll be more appreciated and loved. (Her friends adore her.) In fact, this sort of 'giving' is preventing her from getting what she wants most...a successful, intimate, romantic relationship.
Well, truth is, little boys may appreciate such levels of giving butareal man does not wantagenerous woman...no matter how much he says he does. Chances are, he will enjoy it forawhile. Let's be honest with ourselves. Is thereaman among us who doesn't enjoy free treats, especially ifawoman were to throw herself ataman???? But he won't fall in love. I have seen how some women just give and give endlessly toaguy who takes and takes and has no qualms about just accepting it likeasponge and the woman may not even realize that when giving so much, by doing for him, performing for him, giving him ideas and advice, he doesn't love it. He resents it. He finds it disrespectful. And he does not respect her....cos he wantsawoman to love and one who loves him - not one who behaves likeaMadam Know-it-all-do-it-all. I have seen how men seem to shy away from capable women and zoom in for women who are inalesser state than they are. Ultimately, he leaves. And then what happens? Ah - the woman blames the man when it is her own fault!!! I am being objective here.
Such women love to tell men what to do and they think they are doing menafavor. Tsk tsk tsk...Most men do not wake up in the morning and thank God for sendingawoman to tell him what to do. Men cannot fall in love with women who give too much.
Men fall in love with women who love themselves first and know how to give back in appreciation.
Men need to be pro-active inarelationship to "feel good".
Women must "feel good" and satisfied inarelationship to "do good".
It becomes tricky when one is "doing good" for someone without "feeling good" about it - in other words, one is definitely giving too much. Of course, it is different if you areaman. At the same time, there are many "men" in women's bodies in that they want to dominate the men and feel emancipated but in this way, they suffocate men!!!
When we give equally toaman, we neutralize the chemistry.
When we give more, we block intimacy.
When we give less, mother him less, order him less, expect less and really appreciate what he offers, we fall in love and can embark onasatisfying relationship BUT that is rare and difficult because for so long, many of us have been conditioned (consciously or unconsciously) into expecting what counts inarelationship.
So the next time you want to give toaman you like...your date, your husband, your teenage son...
Ask yourself, "Am I giving too much?"
If the answer is "yes", then stop what you are doing (or saying) and wait for him to give you something. (It could beacompliment,adinner invitation orapiece of advice, whatever...)
Then say, "thank you".
A book which helped mealot in my road to recovery (sadly - I lent it toagirlfriend and she has not returned it yet and I feel too embarrassed to ask for it afterafew reminders) is Robin Norwood's "WOMEN WHO LOVE TOO MUCH."
It can be uncomfortable to receive whataman has to offer. (Especially since it will never be how or what you would give.) (Ever.)
But it is important to acknowledge him and say "thanks", especially if he is divulging information about his past. Some could even dump the poor guy after he confesses his past to her even though he did not want to in the first place because he knew she would react that way but had no choice because she coerced or blackmailed him to do so and then judged and condemned him!
From my experience, when one stops giving too much and learn to appreciate and respect whataman can give...the rewards will be most satisfying.
Last but not least, many women spend loads of their time trying to change their partners to fit into their moulds and forget that when we love someone, we accept them for who they are, we love them in spite of...despite....I believe there is one way of making sure we are happy with our partner - just concentrate on being the right partner instead of searching the world for the right partner or trying to change our partner to be what we want them to be and in the process lose them and lose our sanity!
In closing,agood friend of mine told me that she sawabook inabook shop entitled, "ALL YOU EVER NEEDED TO KNOW TO UNDERSTAND WOMEN". She picked up the rather thick looking book and flipped through the pages. Empty. Page after page was empty until she reached the last page where the following sentence was printed in large bold font:
YOU CAN NEVER UNDERSTAND A WOMAN.
Beingawoman, I dare say that women are generally complex, unpredictable and volatile creatures. The path to inner fulfilment is in understanding ourselves and being in touch with ourselves...then only can we avoid making mistakes with men or our friends and loved ones....
So ladies, let's live life to the fullest and avoid the pitfalls ofarelationship and men, don't be too hard on us, ok? After all, we are as human as men...
Haveapleasant evening! Do leaveacomment. I would love to hear your views. Thanks!
This post isareprise of what I wrote and posted here in July 2009.
KUALA LUMPUR,4Ogos — Kerajaan Pakatan Rakyat (PR) Selangor dijangka bakal "mengambil alih semula" 33 daripada 34 loji rawatan air yang dimilikinya dan kini dikendalikan Syarikat Bekalan Air Selangor (Syabas).
"Kerajaan negeri mengambil keputusan untuk 'mengambil alih semula' aset-aset tersebut bagi menjaga kepentingan rakyat Selangor kerana merasakan bahawa loji-loji yang dikendalikan oleh Syabas dan Puncak Niaga didapati tidak beroperasi secara memuaskan bagi membekalkan air secukupnya kepada rakyat Selangor, KL dan Putrajaya," kata exco kerajaan Selangor, Dr Xavier Jayakumar, dalam satu kenyataan hari ini.
"Lawatan exco kerajaan negeri Ronnie Liu, baru-baru ini mendedahkan bahawa Syabas gagal menyelenggara dengan baik pam-pam air, peralatan dan kelengkapan serta tahap kawalan keselamatan aset tangki air dan loji rawatan air milik kerajaan negeri yang menyebabkan berlakunya gangguan bekalan air di beberapa tempat," tambahnya.
"Kita kurang pasti bagaimana Kerajaan Pusat berkeras untuk meneruskan pembinaan loji Langat2dan dilaporkan akan memanggil tender terbuka bulan depan.
"Kita difahamkan bahawa Peguam Negara (AG) turut diseret untuk 'campurtangan' dalam isu ini, dan kurang pasti samada pemimpin-pemimpin Pusat memahami dan menghayati konsep dan moral sistem 'Federalisme' yang diperuntukan dalam Perlembagaan Persekutuan," tambahnya lagi.
Beliau turut menjelaskan, "hak terhadap sumber air, hutan, batuan dan galian dan hal ehwal melibatkan tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri".
"Rakyat akan melihat bahawa sebarang 'pengambilan tanah milik sesebuah negeri dalam Persekutuan secara paksaan' akan dianggap 'menceroboh dan menakluki' hakmilik kedaulatan kerajaan Kebawah Duli Tuanku Sultan Selangor Darul Ehsan.
"Rasanya rakyat Selangor tidak akan berdiam diri," tegasnya lagi.
Syabas dan syarikat utamanya Puncak Niaga menimbulkan persoalan sama ada krisis air ini telah "direka" untuk mempercepatkan projek pembinaan loji rawatan Langat2yang bernilai RM3.6 bilion di mana Puncak Niaga dikatakan akan beroperasi di situ.
Pada 16 Julai, Selangor mengumumkan ia akan mengambil alih operasi Syabas untuk mengelakkan kejadian krisis air yang direka dan telah diterangkan oleh Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai "mencurigakan".
Syarikat bekalan air juga itu berkata catuan air diperlukan kerana kekurangan air, pencemaran sungai serta kerja pembaikan di loji-loji syarikat. -TMI
Posted: 04 Aug 2012 11:13 PM PDT
Source: ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာ၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ (အပိုင်း ၂) by Sai Mayku
ဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းခေတ် အထိ ပြန်သွားပြီး တာဝန်ခံ၇န်တော့ မလိုပါ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဝင်လာသူများ မည်သည့်နှစ်တွင် ဦးရေမည်မျှဝင်လာ သည်၊ မည်သည့်လမ်းကြောင်း မှ ၀င်လာသည်၊ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ၀င်လာသည်၊ ထိုသူများအနက် ယခုအချိန်၌် ဦးရေမည်မျှသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်နေကြပြီ။ ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ တို့၏ ဦးရေမှာ မည်မျှရှိသည်။ မည်သည့် အဆင့်မှ မရသူဦးရေမှာ မည်မျှဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် ဤသို့ မရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးဦးရေ စုစုပေါင်း မည်မျှ ရှိပြီး ကလေးအခွင့်အရေးအရနိုင်ငံ သားခံစားခွင့်ရပြီးသူပေါင်း မည်မျှရှိပြီ -…
– အစရှိသဖြင့် တနိုင်ငံလုံးသိ ဖြေကြား၇န် တာဝန်ရှိသည်။ သို့ မှသာ လူထု တရပ်လုံးလိုက်ပါ စဉ်းစားနိုင်ပြီး ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာနိုင်ကြပါမည်။ အနာဟောင်းများကို ဖေါ်ထုတ်ကုစားခြင်းမပြုဘဲ အပေါ်ယံ ဆီမန်းလောက်မျှဖြင့် ကုသနေလျှင် မိမိတို့ နိုင်ငံသည် ကျမ္မာရေးကောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံမည်သည့်အခါတွင်မျှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယဉ်ကျေးမှုတရပ်သဘွယ်ဖြစ်မသွားမီ အတိတ်ကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် လုပ်ဟန်အား ယခုကထဲက စတင် တိုက်ဖျက်ကြဘို့ လိုပါပြီ။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာအား စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဟန် အခြေခံမှ ချည်းကပ်ခြင်း
(၁) စစ်အာဏာရှင်စနစ် စတင်ခဲ့သည့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများအား ၄င်းတို့ကပင် ဖန်တည်းပြီး လူထုထောက်ခံမှုရအောင် လုပ်ခဲ့သည့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်များစွာ ရှိခဲ့သည်။ ယခုဖြစ်ရပ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ များအား တတိယနိုင်ငံထွက်အောင် ကုလသမဂ္ဂက စီစဉ်ပေးနိုင်လျှင် အစိုးရက ကူညီပါမည်ဟု ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ပြန် ကြေငြာလိုက်သည့် အချိန်တွင် ငါတို့ချစ်တဲ့ သမတကြီး ဟူသော အသံများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
(၂) ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် တည်ဆောက်မည်ဆိုလျှင် စစ်တပ်ကြီးကြီးထားရန် အကြောင်းလုံးဝ မရှိ တော့ပါ။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှုများ၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၏လှုပ်ရှားမှုများအားကောင်း လာလေလေ စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ သိသာစွာ လျော့နည်းသွားလေ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကို စစ်အာဏာရှင် ဟောင်း သစ်များက မလိုလားပါ။ စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ ကြီးကြီးမားမားရှိနေသေးကြောင်း ပြလိုသည်။
(၃) အရေးအကြောင်းဖြစ်လာလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် လည်းကောင်း လူထုအနေဖြင့် မည်သို့မျှ အားကိုး၍ မရ။ တပ်မတော်ကို သာ အားကိုးရသည်ဟု လူထုကို အယုံသွင်း လိုသည်။
(၄) ပြီးခဲ့သည့် လတချို့ က ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ နဲ့ရခိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ခေါင်းဆောင်များ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သွားရောက်သောအခါ ရခိုင်လူထု ထောင်ပေါင်းများစွာက သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည် ဟု သိရသည်။ ဤသို့သော အခြေအနေမျိုးကို စစ်အာဏာရှင်များက လုံးဝ ကြိုက်နှစ်သက်လေ့မရှိပါ။ ရခိုင်လူထုကို ပညာပေးဘို့ လိုပြီဟု သုံးသပ်ပုံရသည်။ ယခုမူ ရခိုင် လူထု ၏ ခြေထောက်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်နိုင်ပြီ ဟု ဆိုနိုင်သည်။ စစ်တပ်ကို အားကိုးနေရသည့် ဘ၀သို့ သက်ဆင်းသွားပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အဓိကကရုဏ်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ လူထုအားလုံး ငြိမ်းချမ်း၊ လုံခြုံ၊ အင်အား ပြည့်စုံစွာ ရပ်တည်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ပြည်ထောင်စု အတွင်းရှိ အခြားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထု အားလုံးပါ အင်အားချည့်နဲ့ နေပါမည်။ နောက်ထပ် တရုပ် ဗမာ အေ၇းအခင်း ပါ ဖန်တည်းခြင်းခံရပါက စစ်တပ် က ကိုင်မြှောက်ထားသော သေနတ်အောက်၌ အရိပ်အာဝါသ ခိုပြီး အသက်ရှင်ရသည့် ဘ၀သို့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီး တရပ်လုံးကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။
(က) ယခုအချိန်၌ ရိုဟင်ဂျာများသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် (တနည်းအားဖြင့်) လူအဖြစ်အသက်ရှင်ခွင့် ရနိုင်သည့် အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာများပင် မရရှိဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါသည်။ ဤသည်မှာ လုံးဝ မဖြစ်သင့် ပါ။ လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှ ကြည့်လျှင် မဖြစ်သင့်သလို မေတ္တာတရားကြီးမားသည်ဟု ဂုဏ်ယူကြလေ့ရှိသော ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်များ အနေဖြင့် အမြန်ဆုံးကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် စဉ်းစားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
(ခ) ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုများကို အားပေးရာရောက်ပါသည်။ တရားမျှတမှုကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြု ရာရောက်သည်။ မိမိတို့အမြင်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ထုတ်ဖေါ်သင့်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သမျှ အမှန်တရားများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းသင့်ပါသည်။
(ဂ) ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သည့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ၀င်ရောက်ကျူးလွန်မှုကို နိုင်ငံတကာက ရက်စွဲအတိအကျဖြင့် ထောက်ပြလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကြီး တစုံလုံးကို အစမှအဆုံး သေချာစွာဖေါ်ထုတ်ပြီး နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူများ အပါအ၀င် ဦးဆောင်ကျူးလွန်ကြသည့် တရားခံအားလုံးကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ မရွေးဘဲ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံဖြင့် ထိရောက်စွာ ဖေါ်ထုတ်အရေးယူနိုင်မှသာ နောင်သည်လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါမည်။
(ဃ) ပြီးခဲ့သည့် နအဖ စစ်အစိုးရအောက်၌ ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားခဲ့သော နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိသည့် ပြစ်မှုကြီးများကို ကုလ သမဂ္ဂ က ဦးဆောင်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးစေရန် လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အရှိန် ကောင်းစွာရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တော့မည့် အနေအထား ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများ လုပ်ပေးသယောင် နှင့် လမ်းကြောင်းလွှဲနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယင်းလှုပ်ရှားမှုမှာ ယာယီ တိမ်မြှုပ်သွားခဲ့သည်။ ယခုရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ပြစ်မှုကြီးများထပ်မံကျူးလွန်နေပြန်ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း ၅၈ ဖွဲ့က စုပေါင်း၍ ဤမှုခင်းကြီးအပေါ် နိုင်ငံတကာ အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုလာပါပြီ။ ဤ လှုပ်ရှားမှုကို လူထုတ၇ပ်လုံး ထောက်ခံသင့်၊ ၀ိုင်းဝန်းတောင်း ဆိုသင့်သည်ဟု မြင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖေါ်ထုတ်ခွင့်မရပါက နောင် အလားတူပြစ်မှုကြီးများ ထပ်မံကြုံတွေ့ ဦးမည်မှာ မလွဲပါ။
(င) ရွာတရွာတွင် သူကြီးကိုယ်တိုင်က ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသော အမှု၌ သူကြီးသားကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထားပြီး အမှုဖေါ်ထုတ်ခိုင်း၍ မရပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရားစီရင်ရေး ယန္တယားတခုလုံးမှာ လွတ်လပ်မှု လုံးဝ မရှိဘဲ စစ်ခေါင်းဆောင်များအား ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ရဲသည့် အနေအထားမရှိပါ။ လူ့ အခွင့်အရေးကော်မီတီဆို သည်မှာလည်း သမတရုံးအဖွဲ့၏ အစိပ်အပိုင်း တခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြီး သူကြီးတူ အဆင့်လောက်သာ ရှိပါသည်။ ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည့် အဓိကရုဏ်းကြီး၌ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်က မိမိတို့ အစိုးရ နှင့် စစ်တပ်၏ လက်ချက် မည်သို့ မျှ ပါဝင် ပတ် သက်ခြင်း မရှိကြောင်း သက်သေပြရဲသည် ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် တရပ်စေလွှတ်ပေး ရေး အတွက် ကုလသမဂ္ဂသို့ အမြန်ဆုံး ပန်ကြားရန် တောင်းဆိုသည်။
(ဆ) ရိုဟင်ဂျာများအပါအ၀င် ရှစ်သိန်းခန့် မျှသော မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များ ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဦးဘရှိန် ပြောသကဲ့သို့ မ၀င်သင့်ဘဲ ၀င်လာသူများရှိနေလျှင် နောင်ကိုဆက်ပြီး မ၀င်လာနိုင်အောင် တားဆီးကာကွယ် သည့် နည်းလမ်းကို အမြန်ဆုံး ရှာရမည်မှာ မုချဖြစ်ပါသည်။ ရောက်သင့်၊ ရှိသင့်သော လူဦးရေထက် အဆများစွာပိုကာ စစ် အာဏာရှင်စနစ်နှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်သစ် ဟောင်းများ၏ တာဝန်ရှိမှု အောက်တွင် ရောက်ရှိနေကြပြီ ဖြစ်သူများကိုမူ ရ၀မ်ဒါတွင် ဟူတူများက တူစီများအပေါ်ကျင့်သုံးသည့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုပုံစံမျိုးဖြင့် ရှင်းပစ်၍ မရနိုင်ပါ။ လူသား ချင်းစာနာသည့်စိတ်ဓါတ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး လူမျိုး ဘာသာ စကား ဓလေ့ထုံးတမ်း ယဉ်ကျေးမှု မတူကြသူ များ အတူငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်သည့် လူ့ အဖွဲ့အစည်း တရပ်အဖြစ် တည်ဆောက်ဘို့ ကြိုးစားရန်သာ ရှိပါသည်။
(ဇ) နောင် သည်လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး ကို မုချရှောင်လွှဲနိုင်ရန်မှာမူ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကို အမြစ်မှနေ၍ ချေမှုန်းဘို့ လိုပါ သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အတွက် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီးတရပ်လုံး လက်တွဲကြဘို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ သို့မှသာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယား တစုံလုံး ကို ပြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာသာသည့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်လာနိုင်ပါ မည်။
ဤစာတမ်းတိုအား အချိန်တိုအတွင်း အမြန်ဆုံးရေးသားရသဖြင့် မပြည့်စုံနိုင်မည်မှာ သေချာပါသည်။ စာရေးသူ အနေ ဖြင့် စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတမှုအခြေခံတွင် မိမိတို့ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ငြိမ်၊ တောင့်တင်း၊ ကြီးထွား၊ စည်ပင် သည်ကို မြင်လိုသော စေတနာဖြင့်သာ ရေးသားပြုစုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိထက်ပို၍ အဆများစွာ တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ပညာရှင်ကြီးများ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ များ၊ လူထုများ မြောက်များစွာ ရှိပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အဓိကကရုဏ်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် နည်းလမ်းမှန်သမျှ ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားကြ၇န် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
Posted: 04 Aug 2012 11:01 PM PDT
by FB of U Aung Htoo
ရိုဟင်ဂျာပြသနာနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဘယ်ဆုနဲ့ မထိုက်တန်ကြောင်း လူသိရှင်ကြား စွပ်စွဲချက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
မနေ့ ကမှဖြစ်သော ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် နေ့ တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရား နိုင်ငံ တကာ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနမှ ရိုဟင်ဂျာလူထုများ ဘ၀ပျက်နေကြသည့် ပုံများ၊ စခန်းအတွင်းနေထိုင်ရာ တွင်လည်း အကူအညီများ မရရှိ၍ စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ ဖြစ်နေပုံ များ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ လှေဖြင့်ကူးပြေးရန် ကြိုးစားသော်လည်း အဆိုပါ နိုင်ငံရှိအာဏာပိုင်များက လက်မခံ ဘဲ ထမင်းထုပ်တယောက်တထုပ်ပေး၍ ရေထဲသို့ပြန် မောင်းထုတ်လိုက်သဖြင့် အော်ဟစ်ငိုကြွေးကာ လှေပေါ်ပြန် တက်သွားကြရသည့် ပုံများကို အချိန်အတော်ကြာ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။ တဆက်တည်းတွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရား နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနက ရိုဟင်ဂျာပြသနာကို လေ့လာလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိ သော ကုလသမဂ္ဂမှအပါအ၀င် ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ကို အင်တာဗျူး လုပ်ပြီးတင်ပြသွားခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ (Human Rights Watch) မှ Brad Addam က အစိုးရအာဏာပိုင်များသည် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှစပြီး ဘက် တဘက် မှ ရပ်တည်ကာ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ရက်စက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တိတိကျကျ ပြော သွားခဲ့သည်။
လန်ဒန်မြို့၌ အခြေစိုက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ ဟု အမည်ခံထားသူ မိုဟာမက် နူး (Mohamed Nour) ဆိုသူက နိုင်ငံကြီးများသည် ဤသို့သော ကျူးလွန်မှုကြီးများကို နုတ်ဆိတ်နေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဝင် ၍ စီးပွားရေး နှင့် အခြားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများ လုပ်ခြင်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများ အပေါ် ကိုင်တွယ်မှုများ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အောင်ဆန်းစုကြည် သဘောတူညီပြီးဟူ၍ ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့ ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာ အရေး အပေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မျက်စိမှိတ်ထားလျှက်ရှိကြောင်း၊ အောင်ဆန်း စုကြည်သည် နိုဘယ်ဆုနှင့် မထိုက်တန်ကြောင်း နိုင်ငံတကာရှေ့တွင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် စွပ်စွဲပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
မြန်မာစကားပုံ တခုရှိပါသည်။ အပျက် အပျက်နှင့် နှာခေါင်းသွေးထွက်တော့မည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာအရေး နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာမက တိုင်းရင်းသားပေါင်း စုံ လူမျိုးစုများအားလုံး နှင့် တိုင်းပြည်ပါ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းပါတော့မည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောင်းပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာကပိုပြီး သိလာသည်ဟူ၍ ၀င့်ကြွားနေကြသည့်အချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပင် စတင် လက်ညှိုး ထိုးခြင်းခံရကာ တမျိုးသားလုံးဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးခြုံးရမည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားမှာ စိုးရိမ်မိပါသည်။ ဤ အချိန် တွင် ပြသနာ၏ အခြေအမြစ်ကို ခေါင်းအေးအေးထား၍ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာရန် လိုအပ်လာပါသည်။ အနာသိ လျှင် ဆေးရှိနိုင်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှနေ၍ နိုင်ငံတကာက စတင်ထောက်ပြဝေဘန်လာမှုများကို အဆိုးမြင် အနေဖြင့်မကြည့်သင့်ကြောင်း ဦးစွာတင်ပြလိုပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း ကြီး၊ ငယ်၊ လတ် များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဆိုးဝါးပြင်းထန်သော ပြစ်မှုကြီးများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီး ဘက်မှ ရပ်တည်ကာ စစ်အစိုးရအား တောက်လျှောက်ပင် ဆန့်ကျင်ကန့် ကွက် ဝေဘန်ခဲ့ ကြ သည်ကို မမေ့သင့်ပါ။
ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ ဘီဘီစီ မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေးဆွေးနွေးခန်းတွင် ကျောက်ဖြူမှ ရှေ့နေကြီးတဦးလည်းဖြစ်၊ စစ်အစိုးရတည်ထောင်ထားသော လွှတ်တော်တွင် အမတ်တဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးဘရှိန်က ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ကို မပြင်သင့်ကြောင်းကန့်ကွက်ဆွေးနွေးရာ၌ ဥပဒေသက်သက် နှင့် ပြောလို့မရကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ ပကတိ အခြေအနေကို ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်နီးခြင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှိနိုင်ငံမှာ လူဦးရေသန်း ၆၀ မှ သန်း ၁၆၀ အထိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသား ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာ အကြုံးမ၀င်သူများရှိလျှင် ထိုသူများမှာ မိမိတို့ ဆီ ဘာကြောင့်ရောက်လာသလဲဟု မေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးမှာ အဓိကကျကြောင်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့သော ခေတ်မှီတိုးတက်သည့် နိုင်ငံကြီးမျိုးသည်ပင် လုံခြုံရေးကို အဓိက ထားရကြောင်း ဖြင့် ဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်။ ဤအင်တာနက် http://youtu.be/esS0jgYGaLk တွင် ပြန်လည်နားထောင်နိုင်ပါသည်။
စာရေးသူသည် ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ အပေါ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနှင့် ပြည်တွင်းဥပဒေ အခြေခံများအပေါ်မှသာ ဇောင်းပေးဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် ဦးဘရှိန် တင်ပြခဲ့သည့် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ရှုဒေါင့်မှ ဆွေးနွေးချက်ကို တုန့်ပြန်ရန် အချိန်မရခဲ့ပါ။ တကမ္ဘာလုံးက စောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုလျှက်ရှိသော နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနကြီးတခုက ယမန်နေ့က ရိုဟင်ဂျာပြသနာကို အတော်ပင်အချိန်ပေးကာ မီးမောင်းထိုးလာသည့်အချိန်၌ လူထုများအတွင်း မှန်ကန် သည့် အယူအဆများ ရှိလာနိုင်စေရေးအတွက် ဦးဘရှိန်၏ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအယူအဆကို တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ် လာပါသည်။ အတွေး မှန်မှ အလုပ်မှန်မည်ဟု ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ဟူသည်မှာ နိုင်ငံတခုကို အခြားနိုင်ငံတခုက သို့မဟုတ် အများက စစ်ပြုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတခု၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို အခြားနိုင်ငံတခုက သို့ မဟုတ် အများကထိပါးစော်ကားခြင်းဟူ၍ ယေဘုယျအားဖြင့်နားလည် ပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ ရိုဟင်ဂျာပြသနာသည် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်သည့်အဆင့် မရောက်သေးပါ။ နိုင်ငံ့လုံခြုံ ရေး ကို ထိပါးမှာစိုးရိမ်၍ ဟူသည်ကို အကြောင်းပြကာ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများ၊ ပြည်တွင်းဥပဒေများကို ချိုးဖေါက်ကျူးလွန်မှု မှန်သမျှကိုလည်း လက်မခံနိုင်ပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာရေးရာများကို ဆက်ဆန်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြသနာများစွာ ကြုံတွေ့ ရပြီး ပြင်းထန်သောဝေဘန်ကန့်ကွက်မှုများ မကြာမကြာခံရသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုသည် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို အဓိကထားသည်မှန်သော်လည်း နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြ၍ အစိုးရအနေဖြင့် မူဝါဒ ချ မှတ်ပြီး ပြည်တွင်း၌ မိမိနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်လာသော လူမျိုးခြားကိုဖြစ်စေ၊ မွတ်ဆလင်နှင့် အခြားသာသာဝင်များ ကို ဖြစ်စေ ဆန့်ကျင်ကာ နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့် အရေးဥပဒေ များနှင့် ပြည်တွင်း ဥပဒေများကို ချိုးဖေါက်ကျူးလွန်သည် ဟူ၍ မကြားဘူးပါ။ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံကို ဖေါက်ခွဲပြီးအကြမ်းဘက်မှုကြီး ကို ကျူးလွန်ခဲ့သော မွတ် စလင် အစွန်းရောက် အယ်လ်ကိုင်းဒါးနှင့် အိုစမာဘင်လေဒင်အား နိုင်ငံတကာထွက်၍ ပြင်းထန် စွာ အရေးယူခဲ့သော် လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာ၌ ဖြစ်စေ၊ မွတ် ဆလင် ဘာသာ ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်သည်ကို မတွေ့ရပါ။ ဦးဘရှိန်သည် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအယူအဆကို သက်သေထူနိုင်အောင် အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုအား ကိုးကားခြင်းမှာ အခြေအမြစ်မရှိပါ။
ရိုဟင်ဂျာလူထုများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြသနာအပေါ် (State Security) နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး အမြင်ကို ကိုင်ကာ အကြမ်းဖက်သည့် နည်းလမ်း မကျင့်သုံးသင့်ပါ။ (Human Security) လူထုလုံခြုံရေး အမြင်ဖြင့်သာ ဖြေရှင်းဘို့ လိုပါ မည်။ ယင်းအမြင်ဖြင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ရှေ့ရှုပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့် နည်းလမ်းကို အဓိက ထားဆောင်ရွက်မှသာ အမှန် ဆုံးဖြစ်ပါမည်။ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအမြင် ကို ကိုင်စွဲကာ အကြမ်းဖက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ သဖြင့် ယခုမူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူတရပ်လုံးတွင် လူထု လုံခြုံရေး ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ အသွင် ဆောင်သွားပြီး တဘက်ကို တဘက် မုန်းတည်းမှု များ၊ မယုံကြည်မှုများ၊ ထိတ်လန့်မှုများ ခံစား နေ ကြရပြီ ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းနည်း မမှန်ခဲ့သဖြင့် မကောင်းသည့်အကျိုးဆက်များပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဤနည်းကို ဆက် လက်ကျင့်သုံးလျှင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခ အဖြစ်သို့ ရောက်သွားနိုင်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ သည် လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ပါလျှက် အသိ အမှတ်မပြုဘဲထားသည်၊ အသိအမှတ်ပြုပေးရမည်ဟူ၍ ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုနေခြင်း၊ ဖိအား ပေး နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာများ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံနေရသည်၊ အစိုးရကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကျူးလွန်နေသည် ဟု သာ ထောက်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် အကြမ်းဘက်သည့် နည်းလမ်းကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့် တဘက်နှင့်တဘက် အပြန်အလှန်သတ် ဖြတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီး အခြားတဘက်တွင် စစ်အစိုးရ၏ဖန်တည်း ကျူးလွန်မှုများ ပိုမိုတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင် လာ ပါကအခြေ အနေနှစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်သည်။
တမျိုးမှာ ငါတို့မွတ်ဆလင်တွေ ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်ခံနေရသည်ဟု လှုံ့ဆော်မှုများ ပေါ်လာ ပြီး တကမ္ဘာလုံးရှိ မွတ်ဆလင် များက ရိုဟင်ဂျာနောက်တွင် ရပ်တည်သွားနိုင်သည်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးမှ မွတ်ဆလင်အရေး သို့ကူးပြောင်းသွား နိုင် သည်။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများက ရိုဟင်ဂျာများဘက်မှ ရပ်တည်အားပေးမှုများ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်လာနိုင် သည်။ ဤ အခြေအနေသို့ရောက်သည့်အခါတွင်မှ တကယ်တန်း နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ထိခိုက်လာမည်။ လူထုလုံခြုံရေးမှာမူ တွေးရဲစရာ ပင် မရှိတော့။
အခြေအနေနောက်တမျိုးမှာ ရိုဟင်ဂျာများသည် လူမျိုးအဆင့်အတန်း မရထိုက်ပါဘဲလျှက် လူမျိုးအဖြစ် အတင်းတွန်း တင်သဖြင့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ပါဝင်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ဤသို့ သော သတ်ပွဲကြီးများ ဖြစ်ပွားရ သည်ဟု ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ Genocide ခေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်သည်။ နိုင်ငံတကာ့အလယ်တွင် ဤသို့ စွပ်စွဲခံလိုက်ရလျှင်ပင် အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းလှပါသည်။ တကယ်ဆက်ကျူးလွန်လျှင်လည်း နိုင်ငံ တကာက တကယ်တန်း အရေးယူမှာသေချာသည်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်သည့်အဆင့် အထိ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော လူမျိုးများရှိသည့် နိုင်ငံဟု သဘောထားကာ နိုင်ငံခြားခရီသည်များကအစ ရှောင်သွားနိုင်သည်။ လူထု စီးပွားရေးဘ၀ တိုးတက်ရန် မမြှော်မှန်းနိုင်တော့။ ဤသည်မှာ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအခြေခံမှ တင်ပြခြင်း လည်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရေးဟူသည်ကို ဤသို့စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
စာရေးသူသည် ယခုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင် အဓိကရုဏ်းအပေါ် သုံးသပ်ရာတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ ရိုဟင်ဂျာ သည် လူမျိုးတမျိုးဟုတ်၊ မဟုတ် အခြေခံမှ မချည်းကပ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံး၌ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးကာ ဒီမိုကရေစီ စစ်မှန်စွာရရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်၊ စုဝေးခွင့်များ ရမှ သာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နက်နက်ရှိုင်း ဖေါ်ထုတ် လေ့လာ အမြင်ခြင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးနိုင်ကြပြီး လူမျိုးတမျိုးဆိုသည် ကို မည်သို့ သော အခြေခံများဖြင့် သတ်မှတ်သင့် သည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကိုပါ လူထုအခြေခံဖြင့် ဖွင့်ဆိုနိုင်ကြပါမည်။ ထို့နောက်တွင် တိုင်းပြည်၏ အရေးကြီးလှသော ကိစ္စရပ်များ၌ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူ၍ ဆုံးဖြတ်ကြရမြဲ ဖြစ်သလို ရိုဟင်ဂျာအား လူမျိုးတမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်သင့် မသင့် ဟူသည်ကို ဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်၇န် လိုကောင်း လိုပါမည်။ မျက်မှောက်အချိန်တွင်မူ အတည်ပြုရန်အခက်အခဲရှိသော သမိုင်းအချက်အလက်ဆိုသည်များကို တင်ပြလာလျှင် ပုဂံ ရာဇ၀င်ကို တုတ်ထမ်း၍ ငြင်းရသည် ဆိုသကဲ့သို့သူမှန်သည် ကိုယ်မှန်သည် အငြင်းပွားမှုများဖြင့် သာ အဆုံးသတ် သွားနိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် အကျိုးမရှိနိုင်ပါ။
သို့ ဖြစ်၍ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နိုင်ငံရေး (တနည်းအားဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဟန်) အခြေခံမှ ချည်းကပ်ပါမည်။ လူမျိုး (Ethnic Nationality) နှင့် နိုင်ငံသား (Citizen) တို့၏ ဆက်စပ်မှု နှင့် ကွားခြားမှု အား လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ သမိုင်း ကြောင်း နောက်ခံမှ စတင် တင်ပြ ပါမည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ အချိန်တွင် စတင်ကျင့်သုံးသော ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၁) ၌ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှစ်ရပ်လုံးကို ပြဌာန်းထားသည်။
ပုဒ်မ (၁၁) (ဃ) —— ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ အထက် အခြားမဲ့သော ဆယ်နှစ်အတွင်း ရှစ်နှစ်အောက် မယုတ်သောကာလ အဖို့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လတ္တံ့သော အာဏာပိုင်နက် အတွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့ ဘူးပြီးဖြစ်လျှင် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံအတွင်းတွင် ထာဝစဉ်နေထိုင်ရန် ကြံရွယ်ခဲ့သည်ဖြစ်၍၊ ထို့အပြင် တရားဥပဒေဖြင့်သတ်မှတ်သော အချိန်အတွင်းတွင် ထိုသို့သတ်မှတ်သော နည်းလမ်းနှင့် အညီ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသား အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းကို ထုတ် ဖေါ်သူတိုင်းသည် လည်းကောင်း၊
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်ကို အခြေခံကာ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ် ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေတွင် အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းထားသည်။
ပုဒ်မ (၃)။ ။(၁) အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ အလို့ငှာ "မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး" ဆိုသည် မှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ချင်း၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ သို့တည်းမဟုတ် ရှမ်းလူမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ၁၈၂၃ ခုနှစ် (မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခုနှစ်) မတိုင်မီ ကာလမှစ၍ ပြည်ထောင်စုတွင်ပါဝင်သော နယ်မြေတခုခု၌ မိမိတို့၏ပင်ရင်းတိုင်းပြည် အဖြစ်ဖြင့် အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့သော မျိုးနွယ်စုများကို လည်းကောင်း ဆိုလိုသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်ကို အခြေခံကာ နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေ တွင်အောက်ပါအတိုင်း ပြဌာန်းထား သည်။
ပုဒ်မ (၃)(ခ)။ ။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ အထက် အခြားမဲ့သော ကာလအတွင်း ဆယ်နှစ်အတွင်း ရှစ်နှစ်အောက် မယုတ်သော ကာလအဖို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်နက်အတွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့ဘူးသူ ဖြစ်ခြင်း။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ခေါင်းဆောင်သည့် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပုဒ်မ ၁၄၆ အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားပြုခြင်း၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်စေရ မည်ဟု ပြဌာန်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြဌာန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် အဆင့်မှ လျှောကျ သွားပြီး အာဏာပိုင်တို့အလိုကျ ဥပဒေပြဌာန်းကျင့်သုံးသည့် အဆင့်သို့ ရောက်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ကို ထုတ်ပြန်ကာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်မှစ၍ တောက်လျှောက်ကျင့်သုံးလာခဲ့သော ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေ ကိုလည်းကောင်း ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ဥပဒေ နှစ်ခုကို ဖျက်ပြီး တခုတည်း ပေါင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးဆက်အဖြစ်တွေ့ ရသည်မှာ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အနှစ်သာရအရ ပြောင်းလဲ မသွားသော်လည်း ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ တွင် အောက်ပါ အားနည်းချက်ကြီးများကို တွေ့ရသည်။
(၂) မူလ ဥပဒေဟောင်းတွင် နိုင်ငံခြားသားတဦးဦးအား နိုင်ငံသားပြုမှု လက်မှတ်ကို လျှောက်ခွင့်ပေးထားပြီး သတ်မှတ် ချက် တရပ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား တမျိုးမျိုးကို ပြောဆိုတတ်၇မည်ဟု ပါရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေ တွင်မူ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့မတိုင်မီ နိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိနေထိုင်သူနှင့် ၄င်းတို့မှ မွေး ဖွားသည့်သားသမီးများကိုသာ လျှောက်ခွင့်ပေးသည်။
ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် ဥပဒေဟောင်းနှစ်ခုမှာကဲ့သို့ မဟုတ်တော့ဘဲ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေသည် ရှုတ်ထွေးပြီး သာမန်လူထုများ မျက်စိလည်အောင် ပြဌာန်းထားသည်။ ဤအချက်မှာ ဥပဒေကို လက်တွေ့ဖေါ်ဆောင်သော အခါ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင် များ၏ လက်တွင်းသို့ ကျရောက်သွားစေသည်။၄င်းတို့နှင့် အလွမ်းသင့်လျှင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို အလွယ်တကူထုတ်ပေး လိုက်သည်။ အလွမ်းမသင့်လျှင် ဟိုစာရွက်တောင်း၊ သည် ထောက်ခံစာထပ်တောင်း နှင့် နှစ်ပေါင်းကြာအောင် အချိန်ဆွဲ ထားလိုက်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်အတွင်း လာဘ်ပေး လာဘ် ယူ သည် ကြီးကြီးမားမား တည်ရှိလာပြီး နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင် မရောက်ရှိသင့်သူပေါင်း မြောက်များစွာသည် လာဘ်ငွေများအပေါ်တံတားခင်းကာ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ လွတ်လပ်သော အာရှ အသံတွင် ဆွေးနွေးထားသည့် အစီအစဉ်ကို ဤ အင်တာနက် http://youtu.be/fhgWJPFfc70 တွင် ပြန်လည်နားဆင် နိုင်ပါသည်။
လွတ်လပ်ရေးရစကရှိထားပြီးဖြစ်သော ရှင်းလင်းသည့် ဥပဒေနှစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းကာ ရှုတ်ထွေးပြီး မပြည့်စုံသော ဥပဒေ ကို ပြဌာန်းခဲ့ခြင်း၊ ယင်းနှင့် ဆက်စပ်ကာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနယ်ပယ်တွင် တဖြေးဖြေးနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ် ယူမှု ကြောက်ခမန်းလိလိကြီးထွားလာခြင်း၊ တတိုင်းပြည်လုံး၌ လာဘ်ငွေများအပေါ်တံတားခင်းကာ တရားဝင် မရောက်ရှိ သင့်သူပေါင်း မြောက်များစွာ ရောက်လာခြင်း စသည်တို့ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ် နှင့် အာဏာရယူအုပ်ချုပ် ခဲ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်များတွင်တာဝန် ရှိပါသည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြသနာသည် န၀တ၊နအဖ ခေတ်တွင်ထိပ်ဆုံး သို့ ရောက်ခဲ့ရာ ယခုလက်ရှိ အာဏာရယူထားသူ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများအနက် တာဝန်ရှိမှုအရပြောလျှင် န၀တ အတွင်း ရေးမှုး (၂) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ယူခဲ့သည့် လက်ရှိ သမတ ဦးသိန်းစိန်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာသည်လည်းကောင်း၊ တရုတ်လူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ သန်းတချို့ချီပြီးရောက်ရှိနေ ကြသည့် ပြသနာသည် လည်းကောင်း၊ ဤ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေ၊ တရားစီရင်ရေး၏ ကြပ်မတ်မှုမရှိတော့ဘဲ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ ပိုင်များက ထင်သလိုချယ်လှယ်လုပ်ကိုင်နေမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူစနစ်၊ စစ်အာဏာပိုင်များ၏ နိုင်ငံရေးအရ အသုံးချ ကစားခံ၇မှု စသဖြင့် အကြောင်းပေါင်းများစွာ ပေါင်းဆုံကာ တည်ရှိလာခဲ့သော ပြသနာဖြစ်သည်။ အရင်းခံမှာ စစ်အာ ဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသည့် အခြေခံတွင် အာဏာကို အုပ်ချုပ်ရေးကိုင်တွယ် သူ စစ် အာဏာပိုင်များကသာ ၇လိုခြင်း၊ ရှင်းလင်းသော လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ် မရှိခြင်း၊ တာဝန်ခံမှု မရှိခြင်း၊ ကြီးကြပ်မှု မရှိခြင်း၊ ပြည်သူလူထုတွင် မေးမြန်းပိုင်ခွင့်နှင့် သတင်းအချက်ရယူပိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေနှင့် အညီကျင့်သုံးခွင့် မရခြင်း၊ ဥပဒေပြသနာ သာမက ဥပဒေစိုးမိုးရေးပြသနာပါတည်ရှိခြင်း အစရှိသည် တို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေအောက်တွင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ရယူခြင်းမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သူများ၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးသမားများအတွက် လွန်စွာလွယ်ကူလှသော်လည်း သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံသား မဟုတ်သူသာမန်လူထုများ၊ ငွေကြေးချို့တဲ့သူများ အတွက်အတော်ပင် အခက်အခဲ ကြီးမားခဲ့သည်။ ယင်းနှင့် ဆက်စပ်ကာ သဘာဝအလျှောက်နိုင်ငံသား စာရင်းဝင်သွားနိုင်သည့် လူမျိုးဖြစ်တည်မှုလှုပ်ရှား မှုမှာ အထူးသဖြင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ တဖြေးဖြေးနှင့် အရှိန်ယူလာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလည်း လူမျိုးဖြစ်မှသာ နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည့် ဥပဒေကို ပြဌာန်းလာသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၅ ကို ကြည့်ပါ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်အရ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသော နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း ဟူသည့် အနှစ်သာရသည် ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပါ တကယ်တန်း အတည်ပြုကျင့်သုံးသွားမည်ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ မဟုတ်သူများသည် မည် သည့်အခါတွင်မျှ နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင်တော့။ နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း အခြေခံသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက ချမှတ်ခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်သောမူဖြစ်သည်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများတွင်လည်း ဤ မူကို လက်ခံကျင့်သုံးလျှက်ရှိကြသည်။ ယခုဤမူကို ဖျက်လိုက်ပြီ။ သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ရန် လမ်းကြောင်း တကြောင်းသာ ရှိတော့သည်။ မိမိတို့သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပါသည်ဟူသည်ကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို၍ တင် သွင်းသော လှုပ်ရှားမှုများပေါ်လာမည်။ ထိုသူတို့အား မူလကပင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အာဃာတ ရှိထားသော လူမျိုးကလည်း တန်ပြန်ဆန့်ကျင်သော လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်လာမည်။ သို့ဖြစ်၍လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများတောက်လျှောက် ဆက်ရှိနေမည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများ ပိုမိုကြီးထွားလာရန်သာ ရှိသည်။
အပိုင်း ၂ ကို ဆက်ဖတ်ပါ…
Posted: 04 Aug 2012 09:36 PM PDT
ကမ္ဘာ့အလင်းမဂ္ဂဇင်း လေးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်သို့ ပေးပို့သော စာရေးဆရာကြီး မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင်ကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ သ၀ဏ်လွှာ
မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုအတွင်း နေထိုင်ကြကုန်သော မွတ်စလင်မ်တို့ထုတ်ဝေသော ကမ္ဘာ့အလင်းသို့ မင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့်ပြည့်စုံသော ဤသ၀ဏ်လွှာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနှင့် ဆရာက ကမ်းလှမ်းလိုက်ရပေသည်။
အကြောင်းသော်ကား ပြည်ထောင်စုအတွင်းနေထိုင်ကြကုန်သော တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့အား အမျိုးဘာသာမရွေး မိမိတို့ အားထားကိုးကွယ်သော ဘာသာတရား အလိုက်ကိုးကွယ်ကြသည့် ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ နေသောသူ အကျိုးတူခံစားခွင့်ရှိကြရမည်။မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သော ဘာသာတရားတော်ကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ကြရသည်။
ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားမွတ်စလင်မ်အပေါင်းတို့သည် အမျိုးဘာသာစိတ်ထက် ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ တည်မြဲမှု – ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ ခိုင်မြဲမှု – ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ ၀ပြောမှုတို့ကို ဆထက်ထမ်းပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဟု တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပေသည်။
မွတ်စလင်မ်တို့၏ လေးနှစ်မြောက်ဖြစ်သော ကမ္ဘာ့အလင်းသို့ စိတ္တသုခနှင့်ပြည့်စုံ၍ တိုင်းပြည်၏ အကျိုးရှိရာရှိကြောင်း တိုးတက်၍ ထုတ်ဝေနိုင်ပါစေသတည်းဟု ဆရာ ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါသည်။
Posted: 04 Aug 2012 09:05 PM PDT
Source : အရှင်ရာဟုလာ (မစိုးရိမ်) ။ in Nik Nayman
"လူတစ်ယောက်အနေနှင့် မိမိတစ်စုတစ်ဖွဲ့၏ အတွေးအခေါ်အယူအဆကို လေးစားကြည်ညိုယုံမျှနှင့် မပြီး။ အခြားတစ်ပါးသောသူများ၏ အတွေးအခေါ်အယူဆများကိုလည်း ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှု မရှိပဲ ဝေဖန်နှိပ်နှယ်ခြင်း မပြုသင့်" ။ (အသောကကျောက်စာ) ။
"မတူသော အယူအဆများ ညှိနိုင်းဆွေးနွေးကြရာတွင်၊ အစဉ်အလာကြောင့် အယူများအပေါ်အားပြုသည်ထက်၊ ဆင်ခြင်တုံတရားကို ရှေ့တန်းတင်သည်က လူမှုရေးသဟဇာတမျှမှုကို ပိုမိုဦးတည်စေနိုင်လိမ့်မယ်" ။ (အက္ကဗာနန်းရင်ပြင်တွင် ဘာသာပေါင်းစုံ နှီးနောဖလှယ်ပွဲကျင်းပပေးခဲ့သော အက္ကဗာမူဆလင် ဘုရင်ကြီး)။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ကောက်နှုတ်ချက်စကားတွေကို ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဒီဘုရင်နှစ်ပါးဟာ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားတွေ မတူကြပါဘူး၊ တစ်ပါးက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ပြီး၊ တစ်ပါးက မူဆလင်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြတာပါ။ သို့သော်လည်း သူတို့ သဘောထားတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အချင်းချင်း လေးလေးစားစား အတူယှဉ်တွဲနေနိုင်ရေးကို အထူးလိုလားကြတယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားလှပါတယ်။
ဦးဇင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဘာသာတရားတွေ အချင်းချင်း မတဲ့အောင်၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့  တစ်ဖွဲ့  မတည့်အောင် ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ မီးမွေးနေကြတာပါ။ အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့ နိုင်ငံရေးအကြပ်တည်းဖြစ်တိုင်း မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ရန်တိုက်ပေးတာပါ။ ဒါကို ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ အာဏာရှင်တွေက လက်နှက်တစ်ခုသဖွယ် အသုံးပြုတတ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေက လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ပိုဖန်တီးလေ့ ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးဝိသေသပြုထားတာတောင်မှ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကလို အဖွဲ့မျိုးတွေဖွဲ့ပြီး သံဃာတော်အချင်းချင်း ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခိုင်းထားတာပါ၊ ယနေ့ သံဃာတွေ တိုင်းတပါးမှာ ထွက်ပြေးနေရတာတွေ၊ ထောင်တွေမှာ အကျဉ်းကျနေတာတွေ၊ ရဲဘက် အလုပ်စခန်းတွေမှာ အနှိက်စက်ခံနေရတာတွေ၊ အလုပ်ကြမ်းတွေ လုပ်နေရတာတွေ၊ စစ်ကြောရေးတွေမှာ လူမဆန်စွာ စနစ်တကျ နှိပ်စက်ခံနေတာတွေကို နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကတွေ မသိဘဲ မရှိပါဘူး။ သိသိကြီးနဲ့နှုတ်ငုံပိတ်နေတဲ့အပြင် အာဏာရှင်အလိုကျအောင်တောင် သံဃာတွေကို ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်နေတဲ့ သံဃာ့အာဏာရှင်အသွင်တောင် ပိုဖြစ်ပြနေပါတယ်။
အာဏာရူးအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ မဟာသံဃာ့ အဖွဲ့စည်းကြီးဆိုတာ ဒီနေ့ သာမန်လူတွေတောင် နားလည်လာပါပြီ။ သံဃာထုရဲ့ ဘ၀တွေကို ဘာလုံခြုံမှုမှ မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်း သိလာပါပြီ။ နယ်က တောက အဖိုးအဖွားတွေအတွက် မြို့ပေါ်တတ် စာသင်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မြေး ကိုရင်၊ ဦးဇင်းတွေ အန္ဒရာယ်ဖြစ်မှာ စိတ်မချရတဲ့ အနေအထားမှာ ရောက်နေပါပြီ။
အာဏာရူးတွေ မတရားအုပ်ချူပ်လာနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ အာဏာရှင် မဆလ န၀တ နအဖတွ အကွက်ဆင် ဖန်တီးခဲ့လို့တရုတ် – ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ကြလို့ ၊ ကုလား – ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ကြလို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်း သေကြေပျက်စီးခဲ့ရတာတွေ သာဓက ရှိပါတယ်။
အာဏာရူးတွေဟာ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားအချင်းချင်း သွေးခွဲလှုံ့ ဆော် ပြဿနာဖြစ်အောင် လုပ်ရုံမက ဘာသာတူ လူမျိုးတူအချင်းချင်းလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည်မှုနည်းအောင် ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ယုတ်မာစွာ လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ ယနေ့ပြည်သူတွေ သတိမူ ဂရုစိုက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ မူဆလင်နဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အချင်းချင်းကြားထဲ လုပ်ကြံသွေးထိုး ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာဏာရူးတွေ ဆင်တဲ့ ထောင်ချောက်အကွက်ထဲ မ၀င်သွားအောင် တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းက သတိ အတော့်ကို ထားရမှာပါ။
ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်ကမှန်းမသိဘဲ မိမိဘာသာ မိမိလူမျိုးကို ဆန့် ကျင်စော်ကားတဲ့ အပြောတွေ စာတွေ ကြားရ မြင်ရ ဖတ်ရတာနဲ့ချက်ချင်း ခံစားမှုတွေပေါ်လာပြီး အလျင်စလို တုန့် ပြန်မိတာတွေဟာ အာဏာရူးတွေ ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်အကွက်ထဲ အလွယ်တကူ ၀င်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင် သတိထားဖို့ ကတော့ ဒီလိုစော်ကားဆန့် ကျင်ပြောဆိုရေးသားသူတွေရဲ့အပြောတွေ အရေးသားတွေကို ကြားရမြင်ရတဲ့အခါမှာ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီး ဒီလိုအပြောအဆိုအရေးအသားတွေ စတင်လာခဲ့တဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကို စုံစမ်းရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးမှာ ဘာသာရေးမှာ ဦးဆောင်သူတွေအနေနဲ့ လည်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ မိမိတို့လူမျိုး ဘာသာဝင်တွေကို စိတ်လိုက်မာန်ပါ မပြောဆိုကြဖိူ့မလုပ်ကြဖို့ထိန်းသိမ်းရင်း ပြဿနာရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေပြီး လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေကို ဖေါ်ထုတ်ကြရမှာပါ။
ဘာသာတရားတွေကို ဆန့် ကျင်စော်ကားတဲ့ ရေးသားမှုတွေ ရုတ်ချည်းပေါ်ထွက်လာတာဟာ မသင်္ကာဖွယ်ဆိုတာ သတိထားကြရပါမယ်။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ ဖန်တီးကြသူတွေဟာ သူတို့ အချင်းချင်း လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ သာမန်လိမ်လည်မှုတွေမှာ တွေ့ ရတဲ့ပုံစံနဲ့ လည်း တူပါတယ်။ တစ်ဦးက ဆန့် ကျင်ဘက်စကားပြောမယ် နောက် သူတို့ လူ တစ်ဦးက ပြန်ပြီးတုန့် ပြန်ပြမယ်၊ ဒီလိုနဲ့ကျန်တဲ့ သတိမထားမိသူတွေ ခံစားမှုပြင်းတဲ့သူတွေ ပါလာအောင် ဆွဲခေါ်ပါတော့တယ်။ ဒီအတွက် သာမန် ခံစားမှုနဲ့ ပြောသူတွေပါ တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီး ကြီးမားတဲ့ အခြေအတင်စကားများရာကနေ နောက်ဆုံး အုပ်စုလိုက် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်ကြပုတ်ကြ သတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
ဘာသာရေးဆန့် ကျင်စော်ကားမှုတွေကို ရေးသားမှုဟာ ပြဿနာဖန်တီးလိုသူတွေအတွက် အလွယ်တကူနေရာဖြစ်နေလို့ဖတ်တဲ့သူတွေက ပိုသတိထားရပါမယ်။ မူလရေးသားသူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ထုတ်ဖေါ်သိရှိဖို့ခက်ခဲသလိုဈ ဒီရေးသားမှုဟာ အလွယ်တကူ ပြန့် နှံ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဖတ်မိသူတွေဟာ ကိုယ်ကိုတိုင်က ဒီလို ပြဿနာစာတွေ အရေးအသားတွေကို ထပ်မံဖြန့် ဖြူးပေးနေသလို ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်၊ ဆင်ထားတဲ့ပြဿနာထဲ ကိုယ်ကိုတိုင် ပါဝင်လို့ပါဝင်မှန်း မသိနဲ့ဖြစ်သွားနေတယ်ဆိုတာ သတိထားကြဖို့သင့်ပါတယ်။
ထို့ အတူ အထက်မှာ ဖေါ်ပြရေးသားချက်ပါ သတိမူ ဂရုစိုက်ကြရမယ့် အာဏာရူးတွေရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ် နိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေကနေ အာရုံလွှဲရအောင်၊ ပြည်သူအချင်းချင်း အဖွဲ့ အစုအချင်းချင်း လူမျိုးအချင်းချင်း ဘာသာတရားတွေ အချင်းချင်း သွေးထိုးဖန်တီး အကွက်ဆင်ထောက်ချောက်လုပ်တာတွေကို မည်သို့ သော ဆန့် ကျင်ပြောဆိုမှု ရေးသားမှုကိုမဆို မစုံစမ်း မလေ့လာ ရင်းမြစ်ကို မရှာ အခြအနေအချိန်ကာလကို မကြည့်ဘဲ မိမိတို့ ရဲ့ပကတိရိုးသားသော ခံစားမှုများဖြင့် လျင်မြန်စွာ တုန့် ပြန်ကြမယ် ဒီလို ဘသာသာတရားစော်ကားမှု လူမျိုးရေးစော်ကားမှုတွကို အခြားသူ သိစေလိုတဲ့ စေတနာအရိုးခံနဲ့ဖြန့် ပေးကြမယ်ဆိုရင် အမှိုက် စ ပြသာဒ်မီးလောင်ဆိုတာလို လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းကြီးတွေအထိ ဦးတည်သွားနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းထဲ မိမိကိုယ်တိုင် ပါမှန်းမသိ ပါသွားနိုင်တာကို၊ လုပ်ကြံဖန်တီးသူတွေ အကွက်ဆင်တဲ့ထဲ ၀င်သွားမှန်းမသိ ၀င်သွားနိုင်တာကို အထူးသတိထားကြပါလို့ပြည်သူများအကျိုးကို ရှေ့ ထားပြီး မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာရူးတွေ အုပ်ချူပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူပေမယ့် တစ်နိုင်ငံထဲနေ တစ်ရေထဲသောက်ပြီး မိမိတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မြန်မာနိုင်ကြီးအတွက် အချင်းချင်း ပဋိပက္ခမဖြစ်ရကြလေအောင် အစစအရာရာမှာ ဆင်ခြင်သတိနဲ့ပိုမို လက်တွဲစည်းလုံးကြဖို့ ၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်ဖြစ်နိုင်မယ့် လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်နိုင်မယ့် မင်္သကာဖွယ်ဖန်တီးမှုများကို ကာကွယ်တွန်းလှန်ကြဖို့ဖန်တီးသူတွေကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ကြဖို့အလွန်ပင်အရေးကြီးလှပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
အရှင်ရာဟုလာ (မစိုးရိမ်) ။
Posted: 04 Aug 2012 09:03 PM PDT
I wrote the following post on June 5th 2009. While deleting my stuff in Facebook, I stumbled upon this piece. Originally titled THE BEGINNING OF REAL LIVING AND THE END OF MERE EXISTENCE I changed the title to Passion, Purpose and Power and have edited it to reflect my current perspective. Take care and haveablessed day.
Along this journey of life, we grow up, sometimes atatender age and sometimes atamuch later stage in life. There are surreal moments when we feel so alive that the world seems to be so unreal as though we are mere beings floating in our little corner of existence.
And then moments of great disappointment descend upon us when we realize those in whom we placed our trust are not who we thought they were.
So we picked up the pieces, tried to maintain our composure and after that first heartbreak swore that we would never allow any other person to do that to us again.
In the past, bitterness grew but of late, I have learnt to keep the good and throw away the bad AND to keep my distance from such persons. I choose to remember the happy moments and not to succumb myself to the hurt and deprive myself of the opportunity to live and then to merely exist.
And then what? Is it so easy?
History repeats itself and each time, it gets more and more painful and transforms itself into an insurmountable obstacle as we endeavor to forgive and to forget.
Letting go and moving on is never easy but neither is it impossible. Yes, there were tears but after all the roller-coaster ups and downs, I reckon my tears are precious to me and I will not even cry unless it is really worth my tears. Unconsciously, I had been fortifying my weak and emotional side to be more Amazon-like in my character,afar cry from the feeble one I used to be.
We are but humans ourselves and in the circle of life, sometimes we do the same to others, although not deliberately and when they cry, we remember the times when we ourselves cried.
Sometimes we would cry together with our friends but more often than not, we would cry in the comfort of our own little world. There have been times I worried if the teardrops would short circuit the laptop as I expressed grief in an email or inaSkype chat with Angela to unload my woes.
And Angela would say to me, "On my God, Paula....come on. You siau-ah? You crazy ah? Oh my God - you are crying over this.... Grow up. Stop being an emo queen." followed by her laughter. She scolded me, cajoled me, even yelled at me punctuated with her French :-).
Honestly, I am so glad that I never reacted negatively to her criticisms or laughter. I am so glad that she loves me enough to tick me off, laugh at my stupidity, vulnerability and to point out where I erred. She is the mother I lost when I was 11, the girlfriend I always yearned to have and my sparring partner on issues. I used to say that I would die if she died before me and she would knock me into shape by reminding me of how life goes on etc and today, I think I graduated with honors from the University of Angela. :-) I look back fondly at the way she used to tease and sometimes mock me lovingly for the stuff I used to do, things I used to say. Crying is no longer my hobby. Living and not existing is my main pre-occupation now. And I know I have becomeastronger and better person because she cared enough to knock me on the head without the overtures of hypocrisy or pretentiousness.
So we move on - we may leave some friends behind if it hurts too much to continue or make new friends in an effort to make right what went wrong in the past, to prove to ourselves that we can do it right the next time but still there will be hiccups...
At one point in time, I used to cherish the old hurts and disappointments, some which were decades old disappointments and if truth be told, it still hurts sometimes,. Previously, the tears cascaded in moments of weakness. But now, they don't any more. I cannot even remember some of those instances. I have detached myself from such painful experiences and/or toxic people and am able to look at them objectively and continue not just to live, but to thrive. I never thought I would be able to do this but I have and I am so glad for that. Imagine having to take so many decades to reach where I am today. Better late than never.
Yes, life is so short and so often we lose someone we love, someone who meant the world to us be itafamily member,aclassmate,apet orafriend and so on. The past two years, I lost many friends and relatives who passed on because of illnesses. All that brought much heartbreak and tears to my life. I never cried so much but looking back now, I realize I have learntalot from it. I learnt that life is so precious and that I needed to lose weight, keep fit, be emotionally resilient, unemotional and to practise detachment, not suppression of feelings for personal growth to take place.
To really live, I believe that we should look out for those moments of happiness and joy and remember that those moments are treasures while disappointments are temporary setbacks for us to treasure the important things in life which we may have overlooked or taken for granted.
A few months ago, I felt as if I was going into mid-life crisis - worrying about health issues, death and who would die first - my spouse or me etc..and what would happen? My hubby reminded me most wisely - when I worry, I am robbing myself of the chance to happiness and then I would be merely existing, not even realising when the best moments of my life had passed me by...
Life is about living it to the fullest, exploring opportunities, taking up challenges and achieving growth in different areas of our lives. Even at my age now, I want to matter - not just to my family members, but also in tangible ways to leave my mark in society ...and truly, the latter isaformidable task, with all the challenges facing us today but try I must - although MORE wisely now, sizing up those who need help to see if they are genuine cases. Through all that, even though I am now more reserved and even more reclusive than before, I will not hesitate to reach out to help genuine and sincere friends, even strangers.
I truly want to live, and not to merely exist and to take up space on this planet. My life is no accident and there must beacentral purpose or mission for me to fulfil while I am still alive ....And I want to live my life with purpose, passion and power!!! I am sure you do too!
*This post is dedicated to those who have taken the time to connect with me and to help me see myself better and to realize the need to improve in areas of weaknesses. Special thanks to my longsuffering spouse and boys, Angela, Linda, UP41, Joshua, Walla, YK, SK, Freddie, PL, Evelyn and Alan, my beloved cousins and other friends whom I know would rather not be named. God bless you and yours always.
For the record, I only reflected on the past few years because I have spent the past few days deleting my Facebook posts from June 2007 to June 2012. As I read my wall updates and reactions through the past few years, I realize how much I have changed and I am truly thankful even though at first I was miffed that I had been put on Timeline. I must admit I cringed in horror when I saw some of the emo stuff I used to post *gulps*. I don't do that any more. Phew! The rainbow will shine through afterastorm.